Virgil Van Dijk Fariin Qiiro Badan Soo Saaray, Guuldaradii Kiev, Waxa Ay Filan Karaan Mustaqbalka Iyo Mahad Celin Uu Jamaahiirta Kooxdiisa U Soo Jeediyay. – GOOL24.NET
Difaaca dhexe ee xulka qaranka Netherland iyo kooxda Liverpool ee Virgil Van Dijk ayaa fariin dhinacyo badan taabanaysa ku soo qoray bartiisa twitterka wuxuuna kaga hadlay xanuunka guuldaradii finalkii Champions League, sida ay koox ahaan ugu soo wada guulaysteen isla markaana ay guuldaradu u tahay mid wadar ah oo aan hal shaqsi ku koobnayn iyo waxa ay mustaqbalka ka rajaynayaan.
Van Dijk ayaa fariintiisa ku bilaabay qaabka ay murugo wayn isaga iyo kooxdiisa ugu reebtay natiijadii kulankii Kiev ee finalkii Champions league, waxa uu ku xigsiiyay sida ay farxad wayn ugu ahayd in ay ka ciyaaraan finalka balse ayna natiijadii ay doonayeen helin halka uu sidoo kale u mahad ceiyay jamaahiirta kooxdiisa Liverpool.
Virgil Van Dijk ayaa qoraalkiisa ku bilaabay: ” Xaqiiqdii natiijadii xalay waxay ahayd mid burbur ah, laakiin erayo kaliyi cadaalad uma samayn karaan sida aan ugu hanwaynahay kooxdan wayn ee kooxda ciyaartoydan iyo shaqaalahan ah”.
“In aan finalka Champions League uga ciyaaray kooxdan wayn waxay ahayd riyo ii rumowday, inkasta oo natiijadu ayna xalay dhinacagya noqon, wada jir ayaanu u soo wada guulaysanay isla markaana wada jir ayaanu u guuldaraysanay, waananu ka soo kabsan doonaa” ayuu Van Dijk qoraalkiisa sii raaciyay.
Van Dijk oo ka hadlaya in waxa ay kooxdiisa wada gaadhi karaan aanu xad lahayn isla markaana uu mustaqbalka ku faraxsan yahay ayaa yidhi: ” Ma jiro wax xadidaya waxa aynu ka koox ahaan u wada gaadhi karno, waxaana waajib ah in aynu sii wadno rumaysnaanta, anigu waxaan aad ugu faraxsanahay mustaqbalka”.
Van Dijk ayaa fariintiisa khaaska ah ku soo xidhay mahad celinta jamaahiirta kooxdiisa Liverpool oo si layaableh taageero ugu soo muujiyay kooxdooda wuxuuna yidhi: ” Ugu danbayn, waad ku mahadsan tihiin taageerayaasha layaabka leh ee Liverpool. Taageeradiina aad na siiseen waxay ahayd mid madax qaadaysa, aad ayaanu ugu bognay Liverpool ayaanu nahay #WeAreLiverpool”.
Dhinaca kale Van Dijk ayaa eedayn u soo jeediyay jamaahiirta kooxaha Manchester United iyo Everton oo si wayn ugu dabaal degay in Liverpool koobkan laga qaaday wuxuuna sheegay in ay isku arkaan kuwo ceeboobay maadaama oo ay hinaase ama marayr dartii u dabaal degeen.
Dhinaca kale jamaahiirta Liverpool ayaa baraha bulshada ku wadaagay jamaahiirta Everton oo u dabaal degay si waali ah halka qaar ka mid ah warbaahinta England ay sheegeen in jamaahiirta Man United ay koobka Champions league ugu dabaal degeen in ka badan inta ay jamaahiirta Real Madrid u dabaal degeen.
Van Dijk ayaa ka soo muuqday kooxda xili ciyaareedkan Champions league ugu fiicnayd ee ay UEFA soo saartay inkasta oo uu bishii January ku soo biiray Liverpool wuxuuna arintan ku helay sidii uu Liverpool sare ugu soo qaaday shantii bilood ee uu Anfield ku soo qaatay.
LIVE: TOOS U DAAWO Kulanka Xiisaha Badan Ee France vs Peru – #WorldCup